दोस्रो पुस्ताका एमाले नेताबीच घोचपेच,योगेशको धारणा एमाले र माओवादीका शीर्ष नेताहरुले सन्न्यास लिनुपर्ने | Sabaiko Online
Home Flash News दोस्रो पुस्ताका एमाले नेताबीच घोचपेच,योगेशको धारणा एमाले र माओवादीका शीर्ष नेताहरुले सन्न्यास...
दोस्रो पुस्ताका एमाले नेताबीच घोचपेच,योगेशको धारणा एमाले र माओवादीका शीर्ष नेताहरुले सन्न्यास लिनुपर्ने
काठमाडौं- पार्टी एकताका विभिन्न विषयमा नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रका शीर्ष नता मौन रहेको अवस्थामा दोस्रो पुस्ताका नेताबाट संगठनात्मक संरचना, नेतृत्व बाँडफाँट तथा सिद्धान्तका बारेमा फरकफरक धारणा सार्वजनिक भएका छन् । यसले यसले नेकपा एमालेभित्र समेत अन्योल जन्माएको छ ।
चुनावपछि सम्पन्न दुई स्थायी कमिटी बैठकले पार्टी एकताको विषय अघि बढाउन एकता संयोजन समिति सक्रिय बनाउने निर्णय गरेको छ । तर समितिको बैठक एकपटक पनि हुन सकेको छैन ।
एमालेमा एकै व्यक्तिले पार्टी अध्यक्ष, संसदीय दलको नेता तथा प्रधानमन्त्री हुनुपर्छ भन्नेदेखि शीर्ष नेतृत्व तहमा रहेका नेताले राजनीतिबाट सन्न्यास लिनुपर्छ भन्नेजस्ता अभिव्यक्ति आएका छन् । आगामी दिनमा पार्टीले लिने सैद्धान्तिक विषयबारे पनि चर्चा हुन थालेको छ ।
संगठन संरचना र नेतृत्व व्यवस्थापन
नेकपा एमालेभित्र माओवादीसँग एकीकरणपछि हुने पार्टी संगठन संरचना, नेतृत्व व्यवस्थापनलगायतका विषयमा नेताहरुले फरकफरक धारणा सार्वजनिक गर्दै आएका छन् ।
चुनाव सकिनेबित्तिकै एमाले महासचिव ईश्वर पोखरेलले नेतृत्व बहुकेन्द्रित हुँदा विगतमा समस्या देखिएको भन्दै केन्द्रीकृत बनाउनुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेका थिए । उनले एकै व्यक्ति पार्टी अध्यक्ष, संसदीय दलको नेता र प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेका थिए । ठूलो पार्टीको हैसियतले एमालेले ती जिम्मेवारी प्राप्त गर्नुपर्ने उनको तर्क थियो । संयोजन समितिमा सदस्य रहेका पोखरेलको अभिव्यक्तिले ठूलै प्रतिक्रिया उत्पन्न गरेको थियो ।
स्थायी कमिटी सदस्य शंकर पोखरेलले दुई सहअध्यक्षको अवधारणा अघि सारेका छन् । ओलीनिकट नेता पोखरेलले एकता महाधिवेशनअघि बहुनेतृत्वमा जाने धारणा सार्वजनिक गरेका छन् ।
प्रचार विभाग प्रमुख रहेका एमाले सचिव योगेश भट्टराईले एमाले र माओवादीका शीर्ष नेताहरुले सन्न्यास लिएर नयाँ पुस्तामा नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नुपर्ने आइतबार बताए । भट्टराईको यो भनाइको व्यापक आलोचना भयो । एमाले पोलिटब्युरो सदस्य विष्णु रिमाल र भट्टराईबीच सामाजिक सञ्जाल ट्विटरमा वादविवाद भयो । ट्विटरमा रिमालले चुनाव लड्दा जित्नका लागि ओली चाहिने भनेर भट्टराईलाई कटाक्ष गरेका थिए ।
महासचिव पोखरेल, शंकर पोखरेल र रिमाल ओली प्यानलबाट निर्वाचित भएका हुन् भने सचिव भट्टराई माधवकुमार नेपाल प्यानलबाट निर्वाचित भएका हुन् ।
एमालेभित्र एकीकृत पार्टीले अपनाउनुपर्ने सैद्धान्तिक विषयमा पनि बहस सुरु भएको छ । पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले नेकपा माओवादी केन्द्रको एक्काईसौैं शताब्दीको जनवाद र एमालेको जनताको बहुदलीय जनवाद खासै फरक नभएको बताएका छन् । पार्टीका उपमहासचिव घनश्याम भुसालको भने फरक तर्क छ । समाजको चरित्र परिवर्तन भइसकेकाले पार्टीले पनि सोहीअनुसार आफूलाई बदल्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
अहिलेको सन्दर्भमा माओवादीको माओवाद र एमालेको जबजको ‘च्याप्टर क्लोज’ भएको तर्क उनको छ । उनको यो तर्कको ओलीनिकट नेताहरुबाट चर्को विरोध भएको छ । केन्द्रीय सदस्य सूर्य थापाले फेसबुकमा च्याप्टर क्लोज–जबजको ! यो के भन्ने खोजेका होला ? भन्दै कटाक्ष गरेका छन् । विवादमा उत्रिएका नेताहरु एमालेको गत महाधिवेशनमा प्रतिस्पर्धी थिए । थापा ओलीको प्यानलबाट केन्द्रीय सदस्यमा र भुसाल माधवकुमार नेपालको प्यानलबाट उपमहासचिवमा निर्वाचित भएका हुन् ।